थापाको निधनले पनौती शोकमग्न – Rajdhani Daily
थापाको निधनले पनौती शोकमग्न
केशवराज पौडेल / काभ्रेपलाञ्चोक
सोमबार भएको यूएस–बाङ्ला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा डा. बालकृष्ण थापाको मृत्यु भएपछि काभ्रेको पनौती शोकमा डुबेको छ । पनौती नगरपालिका कुशादेवी स्थायी घर भएका थापा चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत थिए ।
स्थानीय तहमा आवश्यक सामाजिक काममा निरन्तर अघि लाग्ने थापाले त्यस क्षेत्रको शैक्षिक, स्वास्थ्य र सामाजिक चेतना बढाउन अभियान नै चलाएका थिए । पनौती क्षेत्रमा आमाबुबाको मृत्युपछि गरिने संस्कारलाई पाँच दिनमा सार्नुपर्र्ने आवाज उठाउँदै आएका उनले आफ्नी आमाको निधनमा आठ दिन किरिया बसेर क्रान्तिकारी कदम चालेका थिए । उनले किरिया बसेको समयमा छुन नहुने परम्परासमेत तोडेका थिए ।
वरिष्ठ न्युरो सर्जन थापाको निधनले देशसँगै काभ्रेले एउटा हस्ती गुमाएको पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपानेले बताए । उनले घटना सुन्नेबित्तिकै परिवारसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्क नभएको बताए । ‘शव चिन्ने अवस्थामा छैन, अब पोस्टमार्टमपछि दाहसंस्कार गर्नुपर्छ,’ न्यौपानेले बताए । डा. थापा बंगलादेशमा भएको चिकित्सासम्बन्धी सेमिनारमा भाग लिएर फर्कने क्रममा विमान दुर्घटनामा परेका हुन् । १४ माघ २०२४ मा कुशादेवीमा जन्मिएका उनले त्यहीबाटै एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जमा अध्ययन गरेका उनी २०५१ सालका गोल्ड मेडलिस्ट थिए । उनको मृत्युको खबरले पनौतीका स्थानीयहरू सामाजिक व्यक्तित्व गुमाएको भन्दै चिन्तित बनेका छन् । उनको मृत्युको खबर सुनेसँगै पनौतीका स्थानीयहरू त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेका छन् ।